Nabad! | RFSL Ungdom
Ururka dhallinyarada iswiidhan ee u ololeeya xuquuqda dadka HBT
RFSL Ungdom waa ururka dhallinyarada iswiidhan ee u ololeeya xuquuda dadka kala ah homo (u galmooda jinsigiisa), bi (u galmooda labada jinsiba) iyo trans (qof jecel inuu noqdo jinsi uunnan u dhalan). Waxqabadkeena wuxuu ka soo horjeedaa fikradda ah in laba qof oo kala jinsi ah uun ay caadi tahay inay isku galmoodaan. Waxaynu abaabulnaa goobo ay dhallinyaradu ku kulanto, qof kastana uu ku kalsoon yahay in isagoo shakhsiyaddiisa gaarka ah leh uu halkaa dad kale kula kulmi karo. Hawsheena waxay ku aaddan tahay oo loogu talogalay dadka kala ah homo, bi, trans, queers iyo labeeb oo ay da'dooda ugu badnaan tahay 30 jir.
Ururkeenna waxaa la aasaasnay 1999, isagoo markaa noqday laan ka mid ah RFSL (Ururka dalaayadda ah ee u ololeeya xaquuqda homo, bi iyo trans) taas oo looga gol lahaa in dadka dhallinyarada ah lagu daro u halganka xaquuqdooda. Horumar dhaqso leh ayaa dhacay oo 2003-da RFSL Ungdom wuxuu noqday urur iskii u taagan si dhallinyarada hbtq ay saameyn ugu yeeshaan maamulka Iswiidhan, codkoodana kor loogu qaado oo loo maqlo. Markaa iyo intii ka dambeyseyba waxaan si isdaba joog ah ugu shaqeynaaa inaan bulshada u baddelno dhinaca wanaagsan.
Heer degmo, heer qaran iyo heer caalami
Waxaanu xaafiisyo hoosaad ku leenahay waddanka dhammaantii. Dhallinyara xubnaha ka ah xaafiis hoosaad kasta iyagaa iskood u abaabusha howlgaladooda bulsho: ka billow dabbaaldeg pride ilaa iyo caweys filin iyo bandhigyo kala duwan oo nooc walba leh. Hawlgaladaa gaarka ah ee RFSL Ungdom waa hawlgalada kaliya ah ee degmooyinka qaarkood looga qabanqaabiyo dhallinyarada hbtq. Haddaad xiiseyneyso arrimahaan, nala soo xiriir si aad u ogaato xaafiiska kuugu dhow!
Xagga heer qaran RFSL Ungdom wuxuu qabanqaabiyaa xerooyin waqti lagu qaato oo lagu nasto, goobo kale oo lagu qabto kulamo bulsho, bannaanbaxyo iyo seminaarro. Waxaan sidoo kale abaabulna casharro loogu talogalay dad ka soo jeeda bulshada qeybaheeda kala duwan sida: macalimiinta, shaqaalaha caafimaadka, siyaasiinta iyo dhallinyarada. Waxyaalaha ugu muhiimsan xagga heer qaran waa halganka ku aadan in la helo goobo kulan ee uu amnigooda sugan tahay ee loogu talogalay dhallinyarada hbtq, in la wanaajiyo waxbarashada dugsiyada ee cilmiga galmada, in la wanaajiyo daryeelka caafimaad iyo qaabilaadda dhallinyarada hbtq, siiba kuwa trans-ka ah.
Xagga heer caalami waxaan ku firfircoonahay IGLYO iyo ILGA